Madaxweyne Axmed Xaaf oo magaalada Muqdisho la yimid ciidamo gaar ah (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Axmed Xaaf oo magaalada Muqdisho la yimid ciidamo gaar ah (SAWIRO)
Waxaa maalintii shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya soo gaaray wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf), kaas oo dhawaan lagu doortay doorasho ka dhacday magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Madaxweyne Xaaf ayaa la sheegayaa inuu magaalada Muqdisho la yimid ciidamo gaar ah oo illaaliya amnigiisa, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Kahor inta aanu madaxweyne Xaaf kasoo degin diyaaradii uu la socday ayaa waxaa soo degay ciidamo gaar ah oo isaga la socday, waxayna taasi layaab ku noqotay hab-dhaqankaan cusub oo aan hore looga baran madaxweynayaashii hore usoo maray maamulka Galmudug.
Hab-dhaqankaan cusub ayaa hore looga bartay inuu ku dhaqmo madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas, oo inta badan aan ku kalsooneyn ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa la filayaa inuu kulamo gaar ah la yeesho madaxda dowladda federaalka, isagoona mar uu shalay saxaafadda kula hadlay garoonka Aadan Cadde sheegay in safarkiisa uu yahay mid isbarasho ah.
Si kastaba ha ahaatee, safarka madaxweyne Axmed Xaaf ee magaalada Muqdisho ayaa kusoo beegmayaa xilli haatan la isku diyaarinaayo shirka 11-ka bishaan ka furman doonno magaalada London ee caasimadda dalka UK, kaas oo looga hadli doonno arrimaha Soomaaliya.